ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုရှင်းလင်းစေရန်မည်သို့ - SAM ကို-ဗြိတိန်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » သတင်း » သတင်း » ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုရှင်းလင်းစေရန်မည်သို့
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2018-10-04 မူလ:ဆိုက်ကို
သင်တစ်ဦးကိုသုံးကြလျှင်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးသငျသညျအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဗီနိုင်းသူ့ဟာသူ၏သဘောသဘာဝ, အဲဒါကိုအခြေခံအားဖြင့်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုမလိုအပ်ပါဘူးသင်သိရသငျ့သညျ။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ခြံစည်းရိုးကိုပိုမိုလှပကြာရှည်ခံစေမည်ဖြစ်သောကြောင့်မလွှဲမရှောင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချို့ဖုန် get မည်, သို့မှသာသင်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ်။
ရေညှိအချိန်ကျော်ဗီနိုင်းအပေါ်ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာသင်သည်သင်၏ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအဝါရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ကိုရှာဖွေရန်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ရေညှိဗီနိုင်းအပေါ်ကြီးထွားဖို့ကိုစတင်ပါသနည်း သငျသညျနေရောင်ခြည်နှင့်အစိုဓာတ်၏အကြောင်းရင်းများစဉ်းစားရန်ရှိသည်။ ခြံစည်းရိုးမှပူးတွဲပါအပင်များရေညှိ၏တိုးတက်မှုများအတွက်အာဟာရအခြေအနေများသည်။ သငျသညျရေညှိတိုးတက်မှုနှုန်းတားဆီးဖို့အရိပ်တစ်ဦးခြံစည်းရိုးကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပေမယ့်ဒီ installation ကိုနည်းလမ်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်သင်ထိုသို့ပြုမှမရှိကြပါဘူး။ သို့သော်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကတည်းကမည်သည့်ရေညှိမှသာမျက်နှာပြင်အဆင့်မှာကြီးထွားသို့မဟုတ်အစွန်းအထင်း, Non-စိမ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သန့်ရှင်းရေးမှအဆင်ပြေပါတယ်။
အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးမရှိတော့အဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်မကြာခဏသန့်စင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောပါကတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းရေးမှ OK ကိုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ နေ့လယ်စာစားပြီးနောက်, သင်နေ့လည်ခင်းလက်ဖက်ရည်အဘို့သင့်စိတ်ဓါတ်များကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ကြောင်းစင်ကြယ်ခြံစည်းရိုးရပါလိမ့်မယ်။
· Scrubbing pad ပါ (မဟုတ်တဲ့ပွန်းစားခြင်း)
အဲဒီမှာစျေးကွက်အပေါ်အများကြီးအထူးပြုသန့်ရှင်းရေးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်သည်သင်၏ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး clean ကိုကူညီသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်သည်ထိုသူတို့မဝယ်ချင်ကြဘူးဆိုရငျ, ထိုကဲ့သို့သောရှာလကာရည်နှင့်ပန်းကန်ဆေးစက်အဖြစ်အိမ်မှာမရရှိနိုင်ပါသောအရာတို့ကို, ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာအလွန်ထိရောက်သောနှင့်အဆင်ပြေကြသည်။
အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းကို ယူ. ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာစုပ်ယူထားသည်။ ထိုအခါခြံစည်းရိုးသုတ်ဖို့ကသုံးပါ။ သင်ခြံစည်းရိုးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းကိုသန့်ရှင်းရေးသေချာအောင်ပြန်နှင့်ထွက်တစ်ခုသို့မဟုတ် whirlpool လမ်းအတွက်သွားပါ။ ခြံစည်းရိုးကိုပိုမိုသန့်ရှင်းမှုသန့်ရှင်းနိုင်ဒါအဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းတတ်နိုင်သမျှစင်ကြယ်သောဖြစ်သင့်သည်။ ဖျက်ပစ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်ကြောင်းအစွန်းအထင်းရှိပါတယ်လျှင်သင်သည်ဤအပိုငျးပွတ်တိုက်တစ်ဖြီးကိုသုံးနိုင်သည်။ ခြံစည်းရိုး၏အဘို့ကိုရှင်းလင်းပြီးနောက်, သငျသညျရေနှင့်ပြည့်စုံသည်အခြားရေပုံးနှင့်အတူအဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းသုတ်နိုင်ပါတယ်။
သင်က guardrail ရှင်းလင်းရန်တစ်မှုတ် nozzle နဲ့ရေပိုက်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ထိပ်မှာ Start နဲ့ရေအပျက်အစီးများကိုဆင်းကိုလျှော်စေအလျားလိုက်ရွေ့ပါ။ ဖြည်းဖြည်းချင်းအလျားလိုက်ဦးတည်ချရွှေ့။ အဆိုပါလြျှောစင်ကြယ်သောမဟုတ်ပါလျှင်, သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်နဲ့အခြားအမှိုက်သင့်ရဲ့ခြံစည်းရိုးကိုကြည့်မစင်ကြယ်သောအောင်, သဘောတူညီချက်ခိုင်မာအောင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့အလွန်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူပါတယ်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးသန့်ရှင်းရေးသလဲ? အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကယ့်ကိုဥယျာဉ်ကိုအလှဆင်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက် browse နိုငျသညျ, ကျနော်တို့ကျိန်းသေ, အရည်အသွေးမြင့်မားဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုသင်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံဆောင်ကြဉ်းနိုင်မမျှော်လင့်ပါတယ်။
စင်ကြယ်သောဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးသန့်ရှင်းရေး စင်ကြယ်သောဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးနည်းလမ်းများ အဘယ်ကြောင့်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးသန့်ရှင်းခံရဖို့လိုအပ်သလဲ? ဘယ်လိုမကြာခဏသင်သည်သင်၏ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးရှင်းလင်းသင့်သလဲ ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအဘို့အညာဘက်ကိုသန့်စင်ကိုရွေးချယ်ပါ